ምሳሌ 9 NASV – Mmɛbusɛm 9 ASCB | Biblica
ምሳሌ 9 NASV – Mmɛbusɛm 9 ASCB
1Nyansa asi ne fie;
watwa nʼafadum nson ho.
2Wasiesie nʼaduane afra ne nsã
wato ne ɛpono.
firi kuropɔn no sorɔnsorɔmmea hɔ sɛ,
4“Momma ntetekwaafoɔ nyinaa mmra ha!”
Ɔka kyerɛ wɔn a wɔnni atemmuo sɛ,
5“Mommra mmɛdi mʼaduane
na monnom nsã a mafra no.
6Monnya mo ntetekwaasɛm no na mobɛnya nkwa;
monnante nteaseɛ akwan so.”
7Deɛ ɔtenetene ɔfɛdifoɔ no frɛ ahohorabɔ;
na deɛ ɔka amumuyɛfoɔ anim no nya ɔyea.
8Ɛno enti, nnka ɔfɛdifoɔ anim na ɔmmɛtane wo;
ka onyansafoɔ anim na ɔbɛdɔ wo.
9Ma onyansafoɔ akwankyerɛ na ɔbɛkɔ so ahunu nyansa;
kyerɛkyerɛ ɔteneneeni na ɔde bɛka nʼadesua ho.
10Awurade suro yɛ nyansa ahyɛaseɛ
Ɔkronkronni no ho nimdeɛ yɛ nteaseɛ.
na wɔde mfeɛ bɛka wo nkwa ho.
12Sɛ woyɛ onyansafoɔ a, wobɛnya wo nyansa ho mfasoɔ;
sɛ woyɛ ɔfɛdifoɔ a, wo nko ara na ɛbɛhunu amane.
13Ɔbaa ɔkwasea yɛ ɔkasafoɔ;
ɔnni ahohyɛsoɔ na ɔnni nimdeɛ.
14Ɔte ne fie ɛpono ano,
na ɔte akonnwa a ɛsi kuropɔn no sorɔnsorɔmmea,
15na ɔfrɛfrɛ wɔn a wɔtwam hɔ,
wɔn a wɔnam wɔn kwan so tee sɛ,
16“Momma ntetekwaafoɔ nyinaa mmra ha”
17“Nsuo a wɔwia no yɛ fremfrem
na aduane a wɔdi no ahintaeɛ no yɛ dɛ!”
18Nanso wɔnnim koraa sɛ awufoɔ wɔ hɔ
sɛ nʼahɔhoɔ wɔ ɛda no ase tɔnn.
ASCB : Mmɛbusɛm 9